Global Voices teny Malagasy » 16 Volana Aty Aoriana, Mbola Tsy Vita Ny Fitsaràna Ireo Mpitoraka Bilaogy Zone9 · Global Voices teny Malagasy » Print
16 Volana Aty Aoriana, Mbola Tsy Vita Ny Fitsaràna Ireo Mpitoraka Bilaogy Zone9
Voadika ny 06 Septambra 2015 3:02 GMT 1	 · Mpanoratra Endalkachew Chala Nandika Nancy
Sokajy: Afrika Mainty, Etiopia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Mitondra an'i Natnael ( afovoany havanana) sy ny mpitoraka bilaogy namany Atnaf Berahane ( afovoany havia) ho any amin'ny Fitsarana ny mpitandro filaminana. Sary avy amin'ny bilaogy Trial Tracker (Fanarahana Fitsaràna).
Hatramin'ny nisamborana azy ireo voalohany sy ny namonjàna azy ireo tamin'ny 25 Aprily 2014 dia maro ireo fivoarana sy fiovàna natrehan'ireo mpitoraka bilaogin'ny Zone9 ao Etiopia  momba ny raharaha mahakasika azy ireo. Amin'izany rehetra izany, in-30 mahery izy ireo no niseho teo anatrehan'ny fitsaràna tao anatin'ny 16 volana ary nahemotra isaky ny mihetsika izany. Saingy miaraka amin'ny famotsorana ireo dimy voafonja,  tamin'ny volana Jolay, dia tonga amin'ny sehatra saropady ny raharaha.
Etopiana dimy mpanoratra ( ny efatra any am-ponja ary ny iray tsy nanatrika) no mbola tsaraina noho ny fanenjehana azy ireo aminà heloka bevava mifandraika aminà fampihorohoroana izay lazain'ny governemanta fa notanterahana tamin'ny fiandohan'ny volana May 2012. Mitarika antsika amin'ny alàlan'ny fivoaran'ny toe-draharaha farany momba ny fitsaràna ireo mpitoraka bilaogin'ny Zone9 mialoha ny fotoam-pitsaràna manaraka amin'ny Alatsinainy 7 Septambra i Endalk Chala, mpikambana iray mpamorona ny fitorahana bilaogy iombonana Zone9 sady mpiara-miasa amin'ny Global Voices.
Ahoana no nanombohany ?
Tsy azon'ny fianakaviana vangiana na omena torohevitra momba ny lalàna nandritra ny telo herinandro ireo mpitoraka bilaogy ireo rehefa voasambotra tamin'ny 25 Aprily 2014. Efatra herinandro monja taorian'ny nisamborana azy ireo dia nanomboka ny fitsarana tsy manam-pahataperana ireo mpitoraka bilaogy ireo. Na izany aza, nandritra izay efatra herinandro izay, lazain'ireo namana sy fianakavian'ireo mpitoraka bilaogy fa mahita ny kaonty Gmail-n'izy ireo misokatra ry zareo. Ilay teboka maitso manambara ny fisokafan'ny kaonty Gmail no nanaitra ny olona akaiky ireo mpitoraka bilaogy, ary maro no nitaintaina fa nampijaliana izy ireo mba hanomezany ny tenimiafin'ny kaonty Gmail-ny nandritra ny fotoana naharitra nanaovana ny famotorana mialoha ny handefasana azy any amin'ny fitsarana, efa telo volana mahery raha atambatra.
Ireo fotoam-pitsarana araka ny daty
Ny fisamborana sy ireo fepetra izay nitazonana ireo mpitoraka bilaogy tany am-ponja no naha-zava-dehibe ny fitsarana tamin'ny faha-17 May satria fotoana nahitana raha toa ka tsy naninona ireo mpitoraka bilaogy. Voalaza fa nentina antsokosoko notsaraina ireo mpitoraka bilaogy talohan'ny 17 May, saingy tsy nisy afaka nanatrika mba hanamarina izany fitsarana izany.
Tsy nisy afaka nahita azy ireo mandra-pisehony teo amin'ny fitsarana ny faha-17 May. Tsy maintsy niandry tamim-pitaintainana nandritra ny ora maro ireo namana sy ny fianakaviana tao anatin'ny fitsaràn'i Arada efa rava, toerana nanombohana ny fitsaràna talohan'ny nanapahan'ny fitondrana hevitra ny hamindràna izany any amin'ny toerana misy azy ankehitriny, ny Fitsaràna Avon'i Lideta. Nifandrombahana ny naka sary ireo mpitoraka bilaogy ireo nandritra ny fanaterana azy ireo tany amin'ny efitra fitsarana rehefa nentina ho tsaraina izy ireo. Maro be ireo mpiambina nanodidina ireo mpitoraka bilaogy ary tena hendratrendratra ny tontolo. Na dia teo aza ny famoretana mafy nataon'ny mpiandry manokana tamin'ireo mpanao gazety sy ny namana, dia nibitsika mivantana sy nandefa ny sarin'ny fitsarana ireo mpitoraka bilaogy ihany izy ireo.
Nanafina ny findainy, nibitsika ny tenin'ny mpitandro filaminana taminy ity olona iray nanatrika rehefa niezaka ny haka sary ireo mpitoraka bilaogy tamin'ny làlany ho any amin'ny fitsarana : “Nanondro ny tany tamin'ny fanondrony ny mpitandro ny filaminana no nivazavaza tamiko ; tsy afaka maka sary na dia ity tany ity aza ianareo na dia ireo mpitoraka bilaogy aza.” Nanomboka tamin'izay, lasa fironana izany fitondrantenan'ireo mpitandro filaminana izany; amin'ny ankamaroan'ny raharaham-pitsarana, asain'ny mpitandro filaminana vonoin'ireo mpanatrika ny findainy rehefa ao anatin'ny fitsarana izy ireo. Tahaka izany ny fomba fandaminana amin'ny tontolon'ny fitsaràna Etiopiana amin'izao fotoana izao. Tsy azo itondràna ‘camera’ na fitaovana fandraisam-peo ao amin'ny efitra fitsaràna na dia hamafisin'ny lalàna etiopiana aza fa ampahibemaso ny fitsarana rehetra.
Nandritra izay fitsarana lavareny 16 volana izay, fotoana vitsy foana no tsy ahitana olona milahatra lava be miandry eo ivelan'ny varavaran'ny Fitsarana Avon'i Lideta mba hanatrika ny fitsarana ireo mpitoraka bilaogy, saingy ady mandrakariva ny fidirana ao amin'ny efitra fitsarana. Manomboka any amin'ireo mpisahana ny fiarovana ka hatramin'ireo mpiasa mpikirakira ny lalàna, ny ankamaroan'ireo mpiasa ao amin'ny fitsaràna no mahasorena sy mahakivy. Ireo mpitandro filaminana kosa mandritra izany fotoana izany dia manao fihetsika jiolahimboto mandrakariva amin'ireo te-hanatrika ny fitsaràna ireo mpitoraka bilaogy. Nandritra izay fitsaràna 16 volana izay, fara-fahakeliny olona telo izay nanandrana naka sary ny fandehan'ny fitsarana tamin'ny findainy no notànana fotoana fohy ary nasaina namono ny sary azony. Noho io trangan-javatra io, tsy mahagaga raha ny tenan'ireo mpitoraka bilaogy no misedra zavatra maro mandritra ny dingam-pitsarana rehetra.
500 andro tany amponja ireo bilaogera
in-36 nahemotra ny fitsarana
lahatsoratra no naseho ho porofo
nijoro nanamarina ny fisian'ireo lahatsoratra ny vavolombelona
mpanao gazety niisa 150 no voaheloka momba ny resaka fampihorohoroana hatramin'ny 2009
Efitra fitsaràna voatokana mampalahelo kely ery ambony amin'ny farany ao amin'ny Fitsarana Avon'i Lideta no misy ny efitra faha-23 fitsarana ny heloka bevava. Na dia efa in-36 nahemotra aza ny fitsarana nandritra ny 16 volana, dia ora 10 latsaka no fotoana lanin'ireo mpitoraka bilaogy sy ny mpanolotsaina azy ireo amin'ny resaka lalàna tao amin'ny fitsaràna. Amin'ny andro fitsarana mahazatra iray, latsaky ny 8 minitra no lanin'ireo mpitoraka bilaogy tao amin'ny efitra fitsarana fa tsy nisy lalàna mafonja na porofom-panenjehana. Lanin'ny mpitsara na ireo mpampanoa miditra tara ao amin'ny efitra fitsarana amin'ny fandehanana handray ny toerany eny amin'ny rihana farany ambony ny antsasa-potoana, avy eo mangataka ny fanemorana ny fitsarana ny mpampanoa lalàna. Indraindray tazoniny ho amin'ny farany indrindra ilay fitsarana fa ireo tranganà heloka bevava hafa no ataony mialoha ny hiverenany amin'ireo mpitoraka bilaogy, asainy mipetraka eo ambony seza hazo lava manoloana ny efitra ry zareo mba hanemorana ny fitsarana.
Nandrasana hiverina eo anoloan'ny fitsarana indray ireo mpitoraka bilaogy amin'ny Alatsinainy 7 Septambra. Mbola hahemotra indray ve ny fitsarana ? Vakio ity fanaparitahana ny Jolay sy ity tatitry ny Aogositra ity  mba hahalalàna bebe kokoa ny momba ilay fitsarana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/06/74063/
 mpitoraka bilaogin'ny Zone9 ao Etiopia: https://advocacy.globalvoicesonline.org/behind-bars-in-ethiopia-campaign-to-free-the-zone9-bloggers/
 famotsorana ireo dimy voafonja,: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2015/07/09/breaking-three-ethiopian-journalists-freed-from-prison-but-others-remain-behind-bars/
 fanaparitahana ny Jolay : https://advocacy.globalvoicesonline.org/2015/07/17/what-you-need-to-know-about-ethiopia-v-zone9-bloggers-verdict-expected-july-20/
 tatitry ny Aogositra ity: https://globalvoicesonline.org/2015/08/17/ethiopias-zone9-bloggers-head-back-to-court-after-15-months-behind-bars/